Antoko mpihira sy VHF : hanotrona an’i Bodo -
AccueilVaovao SamihafaAntoko mpihira sy VHF : hanotrona an’i Bodo
Antoko mpihira sy VHF : hanotrona an’i Bodo
Iray amin’ireo mpanakanto andrimbavilanitra nitondra endrika vaovao teo amin’ny mozika malagasy. Mankalaza ny 30 taona nidirana teo amin’ny sehatry ny mozika i Bodo, ary hanolotra seho goavana ny 30 septambra izao etsy amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina. « Fiderana aloha » no lohatenin’ny fampisehoana ary antoko mpihira maro sy ny tarika VHF no hanotrona azy amin’izany. Araka ny lohatenin’ny fampisehoana dia hanana anjara toerana lehibe ao anatin’ny seho ny hira fiderana. « Hidera aloha satria nomen’ilay Nahary 30 taona hiantsehatra », araka ny fanazavana nentin’i Bodo. Hizara telo ny fampisehoana ka hisantarana ny seho dia i Bodo hotronin’ireo antoko mpihira vitsivitsy eto Antananarivo. Efa nisy rahateo ny fiaraha-miasan’i Bodo tamin’izy ireo ary mandravaka ny hiran’ireo antoko mpihira ireo ny feo mangany.
Nanamarika ny tantaran’i Bodo teo amin’ny sehatry ny mozika ihany koa ny naha-mpikambana azy tao amin’ny tarika VHF. Tarika izay efa 10 taona nisiana ihany koa, ary nahitana ireo mpanakanto kalaza teo amin’ny feo tany am-piandohana. Ankoatra an’i Bodo, dia efa mpikambana tao amin’ity tarika ity ihany koa ry Vy, luk, Mahery ary Fafah. Efa ankizy tanora no mandrafitra io tarika miangaly ireo hira fiderana amin’ny Bà gasy io ankehitriny.
Ao anatin’ny fizarana fahatelo kosa no hikaloan’i Bodo ireo hira maminy rehetra. Tsy ho vita ao anatin’ny fampisehoana iray ireo hira efa navoakany sy voarakitra tao anatin’ny rakikira 21. Hotsongaina araka izany ireo hira nanamarika azy sy ankafizin’ireo mpankafy niainga tamin’ilay rakikira « Neny » ny taona 1991 ka hatramin’ny « Satria tiako… Dada » ny taona 2016.
Tsiahivina fa ny taona 1986 izy no nanomboka niditra teo amin’ny sehatry ny mozika tamin’ilay fifaninanana « Top 16 sur la 2 ». Laharana faha-3 no nisy azy tamin’io. Herintaona taorian’io dia izy no nahazo ny voalohany tamin’ilay hira « Miandry anao ». ny taona 1989 kosa izy no niaka-tsehatra voalohany niaraka tamin’i Solo sy Hery (tarika Njila).